Dagaal laba Jilib ku dhex maray Badhan oo sababay dhimasho iyo dhaawac
dagaal xalay laba Jilib oo beesha Warsangeli ku dhex maray magaaladda Badhan ee Gobolka Sanaag Barri ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac labada Reer kala gaadhay.
Sida uu ku soow aramayo wariyaha Waaheen ee Gobolkaas waxa dagaalkaas ku dhintay Haweenay, afar qof oo midi gabadh tahayna way ku dhaawacmeen.
Maydka gabadha dhimatay ayaa wali yaala Cisbitaalka Badhan, halka dadka dhaawaca ah oo xaaladoodu cuslayd loo kala diraya Boosaaso iyo Gaal-kacayo si loogu daweeyo.
Labada Jilib ee is-dilay oo kala ah Aadan Yacquub iyo Maxumud ayaa isku adeegsaday Rasaas kadib markii xal loo waayay Gar ka dhalatay Gabadh ka soo jeeda labada Beelood midkood oo la daw marin waayay beeshii ay ka soo jeeday.
Xaalada labada Beelood ayaa wali taagan illaa hadana waxa khilaaf ka taagan yahay Aaska Gabadha dhimatay oo ay diidan tahay beesheedu in la Aaso.
Wasiirka Amniga oo sheegay in Qoxootiga Soomaaliyeed Qaar ka mid ah ay Qorsheynayaan Weerarro ka dhan ah Dalka Kenya
Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga dalka Kenya, Joseph Ole Lenku oo shir jaraa’id ku qabtay maanta Jimco ah magaalada Nairobi ayaa sheegay in qaar ka mid ah qoxootiga Soomaaliyeed ee ku nool Kenya ay qorsheynayaan weerarro argagaxiso oo ay ka geystaan Kenya.
Lenku ayaa sheegay in qoxootigan ay dalkooda uga soo carareen ammaan-xumo, isagoo sheegay inay caqabad ku yihiin ammaaka dalkiisa, iyadoo uu ku soo beegmayo hadalkan xilli ay dowladda Kenya dhawaan sheegtay inay qorsheynayso inay xirto xeryaha qoxootiga ee ku yaalla dalkeeda.
“Qaar ka mid ah qoxootiga Soomaaliyeed ah ee ku nool dalkeenna waxay ku howlan yihiin qorshayaal ka dhan ah ammaanka Kenya,” ayuu Lenku ku yiri shirkiisa jaraa’id.
Wasiirka ayaa sheegay in xukuumadda dalkiisu ay dadaal xooggan ugu jirto sidii ay uga hortegi lahayd weerarro kale oo argagaxiso oo laga geysto dalka Kenya, kaddib weerarkii bishii September lagu qaaday xarunta ganacsiga ee Westgate Mall, kaasoo ay ku dhinteen 67-qof.
Sidoo kale, Lenku wuxuu sheegay in qoxootiga ka yimid Soomaaliya oo ay colaado ka jiraan kuna nool xeryaha dalkooda ay gaarayaan 600,000, isagoo sheegay in weerarrada laga maleegayo xeryahaas ay cabsi weyn ku beertay.
Xarakada Al-shabaab eek a dagaalanta Somalia ayaa sheegtay inay mas’uul ka ahayd weerarkii lagu qaaday Westgate, halkaasoo ay kooxihii weeraray gacanta ku hayeen afar maalmood oo xiriir ah.
Inkastoo wasiirku uu hadalkan sheegay ayaa waxaa jira mudanayaal kasoo jeeda gobolka Waqooyi-bari ee Kenya oo ay ku yaallaan xerhaha Dhadhaab ay sheegeen inaysan jirin weerarro laga soo abaabulo xeryahaas, iyagoo ku tilmaamay hadalkaas mid aanay waxba ka jirin oo mar=marsiiyo ah.
Xukuumadda Kenya ayaa sheegtay inay shalay weerartay saldhig ay kooxda Al-shabaab ku lahayd duleedka degmada Diinsoor, halkaasoo ay ku dileen in ka badan 300-dagaalyahan oo kooxdaas ka tirsan, kuwaasoo tababar uu uga socday saldhiggaas.
Dagaal culus oo maanta ka dhacay deegaan ka baxsan degmada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug iyo Puntland oo ka hadashay
Ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay in ka badan 10-qof oo kalena waxaa kasoo gaaray dhaawacyo kala duwan dagaal culus oo duhurnimadii maanta ka dhacay deegaanka Godad oo 30-km u jira magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug.
Dagaalkan ayaa u dhexeeyay ciidammo kala taabacsan maamullada Galmudug iyo Puntland oo ka taliya qaybo ka tirsan gobolka Mudug, waxaana la sheegay in dhinacyadu ay dagaalka u adeegsadeen hubka culus iyo midka fudud.
Inkastoo aan la ogeyn cidda weerarka qaadday ayaa haddana maamulka Puntland wuxuu sheegay in ciidammo taabacsan oo ku sugnaa deegaankaas ay soo weerareen ciidammo ka tirsan kuwa maamulka Galmudug ee ay ood-wadaagta yihiin.
“Weerarku wuxuu uu ahaa mid militeri oo qorshaysan kaasoo ay deegaanka kusoo qaadeen ciidammo ka tirsan Galmudug, waxaana ogaannay in hubka ay ku dagaalamayeen uu ahaa mid ay dowladda Somalia siisay maamulka Galmudug,” ayaa lagu yiri warsaxaafadeed uu soo saaray maamulka Puntland.
Sidoo kale, warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in weerarkan uu ahaa mid uu abaabulkiisa lahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo Amniga Qaranka Somalia, C/kariin Xuseen Guuleed, khasaarihii ka dhashana ay mas'uuliyadiisa qaadayso dowladda Soomaaliya.
Puntland ayaa wuxuu khilaaf xooggan kala dhexeeyaa dowladda federaalka Somalia iyadoo maamulkan uu horraantii bishii Ogoosto ee sanadkan ku dhaawaaqay inuu xiriirkii wada-shaqeyneed u jaray dowladda Soomaaliya, iyadoo aysan ka jawaabin dowladda Soomaaliya eedeynta ay soo jeedisay Puntland.
Lixda qof ee dagaalka ku dhintay ayaa ka tirsanaa dhinacaydii dagaalamay; iyadoo dadkii kale ee dhaawacmayna ay iyaguna ka tirsanaayeen ciidamadii dirirtu u dhexeeyay, waxaana dhaawacyada la kala geeyay isbitaallo ku yaalla Koonfurta iyo Waqooyiga Gaalkacyo.
Maamul goboleedka Galmudug ayaan weli ka hadlin dagaalka, iyadoo lasoo sheegayo inay xiisad colaadeed weli ka taagan tahay deegaankii uu dagaalku ka dhacay, lamana oga sida uu xaalku ku dambeyn doono.
Goobjoogayaal ku sugan deegaankaas ayaa u sheegay warbaahinta in illaa 10 dagadiidka dagaalka ah ay ka qayb-galeen dagaalka, lamana oga illaa iyo hadda sababta keentay inuu dagaalkan qarxo.
Ma ahan markii ugu horreysay oo dagaallo noocan oo kale ah ay ciidamada maamullada Galmudug iyo Puntland ku dhexmaraan deegaanno ka tirsan gobolka Mudug, inkastoo ay dhowr jeer heshiiyo nabadeed kala saxiixdeen labadan maamul.
Deegaanka uu dagaalku ka dhacay ayaa waxaa ka talisa maamulka Puntland, iyadoo ay ku sheegtay Puntland war-saxaafadeedka ay soo saartay inay ka hortagayso khatar walba oo soo wajahda deegaannada ay ka taliyaan ee ku yaalla gobolka Mudug.
Madaxweynaha Somalia, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta booqasho ku tagay xarunta jaamacadda Kismaayo oo ay ku sugnaayeen qaar ka mid ah ergadii soo dooratay hoggaamiyaha KMG ah ee Jubba, Shiikh Axmed Madoobe, wuxuuna sidoo kale booqday dekedda Kismaayo.
Maxkamada Ciidanka Qalabka sida oo Maanta xukuno adag ku riday dagaalyahano katirsanaa Al-Shabaab.
Maxkamada Ciidanka Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukuno adag oo xabsi ah waxa ay ku riday rag lagu soo eedeeyay in ay katirsanaayeen Dagaalyahnada Al-Shabaab ee dagaalada kala horjeeda Dowlada Soomaaliya.
Afhayeenka Maxkamadda Ciidamada qalabka Sida ee Dowladda Federaalka Soomaaliya C/llaahi Maxamed Muuse (Keyse) ayaa sheegay in Maxkamadu maanta xukuno ku riday rag katirsan Al-Shabaab oo lasoo qabtay iyaga oo ku hoolanaa falal amaanka lidi ku ah sida uu Afhayeenku xusay.
Afhayeenka ayaa intaa raaciyay in raga Al-Shabaab katirsan ee Maanta xukunka lagu riday ay gaarayaan ilaa 5-nin Sadax kamid ahna Markii dambiyadii loo heestay ku cadaatay lagu xukumay xabsi gaaraya 15-sano oo xarig ah, halka mid kalana lagu xukumay hal sano, midka Shanaad ayaa Maxkamada laga sii daayay markii lagu waayay dambigii loo heestay.
C/llaahi Maxamed Muuse (Keyse) ayaa sheegay in Ragan xukunka lagu riday ay racfaan ka qaadan karaan sida ay u arkaan xukunkan ay ku riday Maxkamada Ciidanka Qalabka sida ee Soomaaliya.
Maxkamada Ciidanka qalabka sida ayaa marar kala duwan Xukuno ku riday rag lagu eedeeyay in Al-Shabaab katirsanaayeen kuwaa oo xabsiyadii ay ku xirnaayeen qaarkood laga sii daayay markii laga qaatay lacago laaluush ah.
Cabdi Raxmaan Faroole oo maanta kala diray Golaha Wakiilada Maamulka Puntiland (Daawo Sawirada)
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntiland Cabdi Ramaan Maxamed Faroole ayaa maanta si rasmi ah u kala diray golaha Wakiilada Maamulkaasi oo mudo shan sano ah soo shaqeenayay.
Hoolka Shirarka Golaha Wakiilada Puntland ayaa maanta waxaa ka dhacay kulan balaaran ay kasoo qeyb galeen Madaxda Puntland uu ugu horeeyay Madaxweynaha Maamulkaasi Cabdi Raxmaan Faroole iyo iyo qaar badan oo kamid ah Golaha Wakiilada Puntland ee maanta la kala diray.
Madaxweyne Faroole oo hadal ka jeediyay kulanka ayaa shaaca ka qaaday in Maanta si rasmi ah loo kala diray Golaha Wakiilada Puntland isagoona isamada deegaanada Puntland ugu baaqay in ay soo xulaan xildhibaanada Cusub ee Golaha Wakiilada uga midka noqonaya.
Caawa ayaa la filayaa in Magaalada Garawe lagu qabto Xaflad lagu sagootinnayo Xubnaha Golaha Wakiilada Maamulka Puntiland ee maanta la kala diray , waxaana la filayaa in xaflada sagootinta uu khudbado xasaasi ah ka jeediyo C/Raxmaan Faroole.
Golaha Wakiilada ee maanta la kala direy ayaa xilka loo dhaariyey dhamaadkii sanadkii 2008, waxaana ay ahayd in ay xilka hayaan muddo afar sano ah, Shirkii ansixinta dastuurka ayey ku darsadeen iyaga iyo xukuumadda Puntland hal sano oo dheeraad ah.
Daawo Sawirada Aas Heer qaran ah oo maanta Muqdisho loogu sameeyay Xildhibaan Cumar Islow Maxamed.
Allaha u naxariistee Xildhibaan Cumar Isloow Maxamed oo ka mid ahaa Xildhibaannada Baarlamaanka oo maalintii talaadada ku geeriyooday magaalada Nairobi ee caasimadda dalka kenya ayaa maanta Aas Qaran loogu sameeyey magaalada Muqdisho,iyadoo Aaskaasi Qaranna ay ka qeyb galeen Guddoonka Baarlamaanka,Xildhibaanno iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Barqanimadii maanta ayaa garoonka diyaaradaha Aadan Cade ee magaalada Muqdisho waxaa laga soo dejiyey Meydka Allaha u naxariistee Marxuum Cumar Isloow Maxamed oo ka mid ahaa Xildhibaannada Baarlamaanka waxaana isla garoonka diyaaradaha lagula dukaday meydka Marxuumka salaadii Janaasada ayadoo salaadana ay kasoo qeyb galeen Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari,Guddoomiye ku xigeenka Labaad ee Golaha Shacabka Mudane Mahad Cabdalla Cawad,inta ugu badan Xildhibaannada Golaha Shacabka , hal Wasiir oo ka tirsan Xukuumadda oo ah Wasiirka Howlaha Guud iyo Dib u Dhiska Mudane Muxidiin Maxamed Kaalmooy,xildhibaannadii hore,waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo ka hadlay salaadii janaasada kadib goobta ayaa shacbiga Soomaaliyeed ka codsaday iney marxuumka iska cafiyaan waxaana uu Alle uga baryey inuu naxariistiisa jano siiyo.
Guddoomiye ku xigeenka Labaad ee Baarlamaanka Mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay geerida Xildhibaan Cumar Isloow Maxamed waxaana uu sheegay in Xildhibaanku uu ahaa nin mug ku dhex leh Golaha Shacabka,
Sidoo kale Xildhibaannada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya qaarkood oo iyaguna ka hadlay goobta ayaa ka tacsiyadeeyey geerida ku timid waxaana ay si kooban uga warameen waxa ay ku xasuusan doonaan.
Allaha u naxariistee Marxuum Cumar Isloow Maxamed waxa uu dhashay sanadkii 1952kii waxaana uu ku dhashay tuulada Ugunji oo ku dhow deegaanka Janaale ee gobolka Shabeelada Hoose,waxbarashadiisa Dugsiga Dhexe waxa uu ku dhameystay Dugsiga Dhexe Dhagaxtuur ee degmada Afgooye,halka dugsiga sarena uu kaga baxay iskuulka Sheekh Xasan Barsame isagoo markaasi kadibna ku biiray Hay’adda Nabad Sugidda Qaranka Soomaaliyeed oo uu ka gaaray darajada Cornel isagoo sanadihii 1981kii-1982kii soo noqday taliyihii nabad sugidda gobolka Bari,kadib hay’adda Nabad Sugidda waxa uu ka baxay kuliyadda Culuumta Siyaasadda ee Jaamacadii umadda intii u dhaxeysay 1982kii-1985kii,dhanka siyaasadana waxa uu ahaa Mudane Baarlamaan lagasoo bilaabo baarlamaanka Dowladdii TNGda ee Carta.
Daawo Sawirada Banaanbax markii dambe Isku Badalay Boob Oo Kadhacay Magaalada Cape Town.
Banaan Baxaan ay dhigayeen dadweyne fara badan oo south africaan ah kuwaa oo ka kala yimid deegaanada tuulooyinka ah ee hoos yimaada magaalada Cape town ee Dalka koofur Africa kuwaa oo ka Cabanayay hooy la'aan ka jirta deegaanada ay ku nool yihiin.
Dadka oo markii hore isugu soo baxay albaabka hore ee looga arimo maamulka Gobolka Westren Cape Magaalada Cape Town ayaa Markii Dambe waxa uu isku badalay xaalada foowdo ah iyo mid qalalaase kadib markii ay goobta soo gaareen dad ka tan badan kuwii loogu talala galay in ay banaan baxa ka qeyb qaataan waxaana xaalada ay noqotay mid boob iyo bililiqo isku badashay.
Wax yar kadib waxaa la kala qaatay Miisaska Ganacsiga ee yaalay Hareeraha Wadooyinka Magaalada Oo ay Ku Ganacsadaan dadka danyarta ah oo ay Somali ubadantahay iyo kuwa ajaanib ah inta la boobay waxaa lagu qiyaasay 13 miisaska ganacsiga ah.
durbadiiba waxaa goobta soo gaaray ciidamadda poliska oo bilaabay in ay xakameeyaan rabashadaha waxaana la xeray goobaha ganacsiga ee waa weyn iyo shirkada ganacsiga ee ku yaala gudaha magaalada ayada oo ciidamada polic-ka ay isku hareereeyeen xarunta gobolka.
Waxaa Jira Dhalinyaro badan oo soomaali ah oo jirdilo ay u geysteen Dadkii dhigayay banaan baxyada kuwaa oo qaar kood la geeyay goobaha cafimaadka ee Magaalada Cape Town
Dhacdaadaan ayaa noqonaysay midee ugu horaysay ee ka dhacda gudaha magaaladda Cape Town , iyadoona inta badan falalka boobka iyo rabshadaha ay ka dhici jireen banaanada magaalooyinka waa weyn.
Al-Shabaab oo ka hadashay dareenkooda ku aadan kordhinta Ciidamada AMISOM ee jooga Soomaaliya.
Xarakada Al-Shabaab ayaa ka hadashay qorshaha la doonayo in lagu kordhiyo Ciidamada AMISOM ee jooga gudaha Soomaaliya iyo taageerada dheeraadka ah ee la siinayo Ciidamada Dowlada Soomaaliya.
Afhayeenka guud ee Al-Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage (Cali Dheere) oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in aysan wax cabsi ah ka qabin ciidamada AMISOM ee la sheegayo in lasoo kordhinayo waxa uuna intaa raaciyay in aysan waxba dhaami doonin ciidamada lasoo kordhinayo kuwa hada jooga.
'' Wax wal wal iyo cabsi ah kama qabno Ciidamada AMISOM hadii lasoo kordhiyo waana la dagaalameynaa waana iska difaaceynaa , ciidamadan la soo kordhinayo waxba ma dhaami doonaan kuwii ana horey ula dagaalanay '' ayuu yiri Sheekh Cali Dheere.
Sheekh Cali Dheere waxa uu sheegay in Ciidamada AMISOM ee hada lasoo kordhinayo ay badal u yihiin kumanaan Askari oo katirsan AMISOM ay ku dileen gudaha Soomaaliya sanadihii lasoo dhaafay.
“Arintani waxay muujineysaa iney waxba tari waayeen kumanaankii askari ee horey gaaladu u keentay dalka, waxaana iska cad in meel ay 20 kun oo askari ka quusatay aysan waxba ka keeni Karin 4 kun oo la soo kordhiyo” ayuu intaa ku daray Shiikh Cali dheere.
Afhayeenka Al-Shabaab waxa uu xusay in mar walbo ay diyaar u yihiin in ay la dagaal galaan cadowga dalka kusoo duulay waxa uuna si cad u sheegay in aysa waxba soo kordhineyn ciidan kasta oo Soomaaliya la keeno diyaarna u yihiin in ay dagaal la galaan.
Hadalkan kasoo baxay Al-Shabaab ayaa imaanaya xili Qaramada MIdoobay ay ka fiirsaneyso in Ciidamo dheeraad ah lagu soo kordhiyo Ciidamada AMISOM ee Howlgalka hada u jooga qeybo kamid ah Dalka Soomaaliya.
Daawo Sawirada Mid kamid ah Marwooyinka Madaxweynaha oo indhaheeda kusoo aragtay Xaalada uu kusugan yahay ...
Mid kamid ah Marwooyinka Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqatay indhaheedana kusoo aragtay xaalada uu xiligan kusugan yahay Fanaanka qaranka Cabdi Tahliil Warsame oo in mudo ah ku xanuunsan Magaalada Muqdisho daryeel caafimaad oo sidaa u weyna waayay.
Marwo Sahro Cumar Xasan ayaa booqotaya Fanaan Cabdi Tahliil Warsame oo xiligan sariir saaran waxa ayna u geysay Deeq lacageed ay ugu tala gashay iyadoo ilaah uga barisay in uu caafimaad deg deg ah siiyo.
Gabar uu dhalay Fanaanka Soomaaliyeed Cabdi Tahliil Warsame ayaa deeqda ay soo gaarsiisay Marwada Madaxweynaha ka gudoontay waxa ayna aad uga mmahad celisay Deeqadan iyadooan ku boorisay umada Soomaaliyeed in ay wax u qabtaan Fanaanka oo in mudo ah ku xanuunsan Magaalada Muqdisho.
Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa lagu eedeeyaa in aysan waxba kala socon xaalada ay kunool yihiin Fanaaniinta qaranka Soomaaliyeed ee ku dhibaateesan gudaha Magaalada Muqdisho, waxa ayna taa badalkeead Dowlada aad u tix galisaa qarash badana ku bixisaa Fanaabiinta hada soo baxay ee Qurbaha ka yimaada.
Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo saaka ku sii jeeda magaalada Kismaayo.
Qaban qaabo iyo diyaar garow ayaa loogu jiraa soo dhoweynta Wafdi uu hogaaminayo Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo saakay lagu wado in markii u horeysay uu tago magaalada Kismaayo ee Xarunta Jubada Hoose.
Sida ay sheegayaan wararka ammaanka magaalada Kismaayo ayaa aad loo adkeeyay, iyadoo shalay ay gaareen wafdi horu dhac u ah Madaxweynaha Soomaaliya, waxaana qeyb ka ahaa Ilaalada gaarka ah ee Madaxweynaha, Saraakiil iyo xubno ka tirsan Madaxtooyada.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa labo goor oo hore ka baaqday safar uu ku tagi lahaa Kismaayo, halkaasoo maalmihii u dambeeyay si aad ah looga sugayay, waxaana is bedel ballaaran uu ka jiraa xaalada guud ee magaalada.
Sawirada Madaxweynaha iyo Calanka Soomaaliya ayaa lagu dhejiyay wadooyinka, iyadoo ciidamo lagu daadiyay xaafadaha, si ay u sugaan ammaanka magaalada, xalay ayay magaaladu gashay jawi bandow ah, markii ciidamo fara badan lagu arkay wadooyinka magaalada.
Maamulka KMG ah ee Jubba ayaa diyaar garow ugu jira soo dhoweynta wafdiga Madaxweynaha, iyadoo booqashada Madaxweynaha kadib ay u soo ambabixi doonaan magaalada Muqdisho, si ay uga qeyb galaan shirka dib u heshiisiinta oo dhici doona 2-da November oo ku beegan maalinta sabtida.
Lama oga inta ay qaadan doonto booqashada Madaxweynaha, hase ahaatee waxaa la filayaa inay wax ka bedesho muuqaalka magaalada Kismaayo oo khilaafyo siyaasadeed ka taagnaayeen, isla markaana dagaalo uga dhaceen.
Daawo sawirada: Madaxweynaha Soomaaliya oo diyaarad Turkish Airlines la soo raacay Shacab Soomaaliyeed.
Madaxweynaha ayaa Madaxda Turkiga kala hadlay xiriirka qotoda dheer ee labada dal iyo sida uu ugu faraxsanyahay doorka hoggaamineed ee Turkigu ka qaateen arrimaha Soomaaliya iyo mashaariicda baaxadda leh ee ay ka fulinayaan Soomaaliya sida waxbarashada, caafimaadka, iyo dib u dhiska dalka, waxaana uu ku dhiiri geliyey in Turkiga ay hanteen kalsoonidii shacabka Soomaaliyeed, isla markaana ay shacabka Soomaaliyeed ka sugayaan inay sii kordhiyaan taageeradooda. Madaxda Turkiga ayaa sheegtay inay ka go'antahay taageerada iyo is-garab istaagooda.
Wafdiga Madaxweynaha ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyay Gudoomiyaha Baarlamaanka Prof. Jawaari iyo xubno ka tirsan Golaha Wasiirada, Xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale.
Madaxweynaha oo la socday Diyaarada Turkish Airlines ayaa diyaarada gudaheeda ku gacan qaaday shacabkii saarnaa, isagoo dhageystay talooyinkooda.
Diyaarada Turkish Airlines ayaa todobaadkiiba Muqdisho timaada ilaa afar jeer, waxaana soo raaca Soomaali fara badan oo qurbaha muddo ku noolaa, kuwaasoo dib ugu soo laabanayay dalka.
Raga la tartamaya Madaxweyne Cabdi Raxmaan Faroole oo soo saaray qoraal uusan ku farxin Madaxweynaha.
Prof. Axmad Cabbaas Axmad (Gacma Gaab) oo ka mid ah Murashaxiinta bayaanka soo saaray ayaa warbaahinta u Akhariyey xili uu ku suganaa Magaalada Gaalakcyo
Murashaxiinta magacyadoodu hoos ku taxan yihiin waxay u tartamayaan xilka madaxweynaha dawladda Puntland marka la gaaro doorashada ku muddaysan in ay dhacdo 8da bisha Jannaayo ee sannadka 2014. Ka dib markii ay in muddo ah wadar ahaan u qiimeynayeen xaaladda dhaqaale, amni iyo siyaasadeed waxaa u wada muuqatay in ay Puntland soo food saartay xaalad khatar ah oo ay tahay in dadkeedu ka badbaadiyo.
Isla murashaxiintaasi waxay isla hubsadeen in sida keliya oo ay Puntland uga badabaadi karto khatarta ay tahay in Puntland ay ka dhacdo doorasho xalaala ah. Sidaas awgeed waxay isla garwaaqsadeen, murashaxiinta kalena ugu baaqayaan, in aan u tartamidda
xilalka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka aanay ka indhasaabin khatarta puntland ku soo fool leh ee ay u midoobaan sidii ay ku qabsoomi lahayd doorasho xalaal ah.
Tan iyo maalinti xafiiska loo dhaariyey, madaxweyne Cabdiraxmaan dadaalkiisa oo dhan wuxuu isugu geeyey sidii uu ugu raagi lahaa madaxweynenimada. Sannadki dheeraadka ku ahaa xilli xakuumadeedki rasmiga ahaa iyo abaabuliddi dorashooyin golayaasha degaanka, ayada oo aanay jirin ururro siyaasadeed oo ku tartamaya, waxaa loogu googol-xaareyey doroorasha madaxweyne oo ah run ahaanti “nin dooran doorta”. Shacabka Puntland wuxuu
14kii Agoosto ku guuleystey in aan maamulka madaxweyne Faroole u meel-marin doorashadi la shaaciyey in ay qabsoomeyso 15kii isla bishaas.
Qabsoomiddii shirweynihii asaasidda Puntland waxaa guddoomiyey Isimmada Puntland. Waxaa kaloo ay tahay in la is-xusuusiyo in doorashadii labaad iyo tii saddexaad ay adkaan lahayeen inay qabsoomaaan haddii anayn Isimadu faragelin ku samayn xiisadihii siyaasadda ee jirey. Maa daama aan weli lagu guuleysan in Puntland u tallawdo tartan xisbiyo badan, mar kasta oo loo noqdo habka ku dhisan qaab beeleedka, waa Isimmada kuwa go’aaminaya qofka noqonaya xildhibaan Golaha shacabka. Arrimahaas oo dhan waxay ka marag kacayaan in mas’uuliyadda ugu dambaysa ee aayaha siyaasadda uu weli
saaranyahay Isimmada. Sidaas awgeed, murashaxiinta bayaankan saxiixay, waxay ku baaqayaaan qabsoomidda Shirkii Isimmada ee uu gogoshiisa dhigay ku-simaha Boqorku, welina aan la laabin..
2.Olole Doorasho oo Xor Ah
In kasta oo nidaamka doorashada ee hab beeleedka ku dhisan aaney si toos uga gayb-gelayn dadweynuhu, waxaa haddana hubaal ah in xildhibaannada waxdooranaya ay ka soo jeedaan qaybaha bulshada iyo degaannadda Puntland oo dhan, sidaas awgeedna ay lagama maarmaan tahay in ay saamayn ku yeeshaan natiijada. Siyaabaha dadweynahu saamaynta ugu yeelanayo natiijada doorashada waxaa ka mid in la abaabulo fagaare murashaxiintu ku soo bandhigayaan afkaartooda muddo ka hor maalinta doorashada.
3.Guddiga Xallinta Khilaafaadka
Guddigii Xallinta Khilaafaadka ee Golihii shacabka ee koowaad waxaa la qabtay doorashadii madaxweynaha ka dib iyo marki ay kale tageenm shirweyinihi dastuuriga ahaa iyo isimaddii kor-joogtaynayey socodka shirweynaha. Sidaas awgeed, ma jirin wax diidma ah oo ka hortimi inuu magacaabo madaxweynihii markaas la doortay. Dororashadii labaad, waxaa
jirey murashixiin uu hormuud ka ahaa Madaxweyne faroole oo ka hor yimi in madaxweynihii markaas xilka hayey uu magacaabo guddigaas. Dhex-dhexaadin Isimadda iyo xubnihi uu magacaabay madaxweynihi markaas oo ahaa muwaaddiniin bulshada sumacad ku leh, aqlabiyaddii murashaxiintuna waa ay ku qanceen. Doorashadii saddexaad oo ahayd tii lagu doortay madaxweyne Faroole, in madaxweynihi xilka hayey uu magtacaabo guddigaas waxaa ka hor yimi murashaxiin uu afhayeen u ahaa madaxweynaha hadda xilka haya, ugu damabaytiina waa la wada magacaabay. Murashaxiinta baaqan saxiixay waxay doonayaan in Guddiga Xallinta Khilaafaadka ay ka wada tashadaan dhammaan murashaxiintu, wixii khilaaf oo ka dhashan loo bandhigo Isimmada si ay guddoon uga gaaraan.
4.Amniga Xilliga Doorashada
Ciidammada Daraawiishta iyo Booliska muddo ayay mushahar la’aan ahaayeen waxaana jira culays dhaqaale oo ay la il-daranyihiin. Sidaas awgeed waxaa lagama marmaan ah in ciidammada aminga la siiyo dhammaan mushaharooyinka ay ku leeyihiin maamulka. Ciidanka Caasimada laga bilaabo 1da Nov. cidda keliya ee lagu halleyn karo waa ciidanka daraawiishta iyo taliskooda uu madaxda ka yahjay Gen.Siciid Maxamad Xirsi (Siciid Dheere). Tirada, nooca hubka iyo hab-dhaqanka ilaalada gaarka ah ee murashaxiinta, oo uu ku jir Madaxweynuhu, waa in la isla cayimo taliyaha Daraawwishtuna uu la socodo
*ALLAA MAHAD LEH*
Waxaana Bayaanka soo saaray Murashaxiinta hoos ku qoran
Ciidamada Booliiska K/Afrika oo gacanta ku dhigay Muwaadin Soomaali ah oo lagu eedeeyay in uu labo dambi galay.
Ciidamada Booliiska Dalka Koonfur Afrika ayaa shaaciyay in gacanta ku dhigeen Muwaadin Soomaali ah oo lagu eedeeyay in uu heestay hub sharci daro ah , kaa oo dagnaa tuulo duleed ka ah Magaalada Johanesburg .
Afhayeen u hadlay Boosliiska Gobolka Gauteng ayaa sheegay in Ninkan Soomaaliga ee Ciidamadu gacanta ku dhigeen lagu qabtay Bistoolad Sharci daro ah sidoo kale uu sameeyay isku day uu ku doonayay in uu dad ku dilo.
Afhayeenka ayaa intaa ku daray in ninkan uu rasaas ku riday dad dibad baxayaal careesan ah oo xiligaasi damacsanaa in ay boob ka geestaan goob ganacsi uu ku lahaa Tuulo hoos tagta Magaalada Johanesberg ee Dalka Koonfur Afrika.
lama shaacin magaca Muwaadinkan Soomaaliga ah ee lagu eedeeyay heesashada Hubka sharci darada ah , waxaana la filayaa in dhawaan maxkamad lasoo taago si loogu qaado dacwadaha loo heesto sida uu Warbaahinta u sheegay Afhayeen u hadlay Booliiska Gobolka Gauteng.
Soomaalida kunool Dalka Koonfura Afrika ayaa inta badan heesta bistoolado sharci daro ah ay ugu tala galeen in ay isaga difaacaan kooxaha burcada ah ee caadeestay in ay Dilaan hantidoodana boobaan.
Qurbo joogta Magaalada Muqdisho kusoo laabata oo ku faana waxyaabo ay dadku aad ula yaabaan!!!
Waxaa Mudooyinkii dambe Magaalada Muqdisho dib ugu soo laabanayay qurbo joog tiro badan oo ka kala imaanayay Wadamo ku yaala Qaaradaha Yurub iyo Mareykanka kuwaa oo sanado badan dalka ka maqnaa.
Qurbo joogta ayaana hada Magaalada kusoo kordhiyay waxyaabo tiro badan oo qaarkood ay wanaagsanyihiin iyo waxyaabo kale oo aad u xun kuwaa oon dhaqan aysan u laheyn umada Soomaaliyeed.
Goobaha ay isugu tagaan dadka qurbaha ka yimaada oo u badan Maqaayadaha Casriga ah iyo Hoteelada kuyaala Magaalada Muqdisho ayaa waxaa layaab kugu noqonaya waxyaabaha ay ku faanayaan qurbo joogta qaarkood oo ay aad u dhibsadaan dadka ku dhaqan Magaalada.
Qaar kamid ah Qurba joogta ayaa iyaga oo codkooda la maqlayo waxa ay ku faanaan in ay guryaha ay Magaalada Muqdisho ka dagan yihiin ay u joogaan eeyo ayna xanaaneestaan taa oo dad badan layaan ku noqota.
Mid kamid ah Maqaayadaha Casriga ee Muqdisho ayaa kula kulmay qurbo joog dhoor ah oo isku jiibanaya xaalada Magaalada kajirta iyo waxyaabaha isbadalka ah ay kala kulmeen iyagoona qaarkood kuwa kale u sheegayay in eeyo guryaha u joogaan, iyadoona Kooxda kale ay aad ula dhacayeen hadalkaasi halka dadka kale ee caadiga ahna ay layaab iyo fajac kunoqoneysay hadalada afkooda kasoo baxayay.
Dadka Soomaaliyeed ayaan dhaqan u laheyn in ay Eey xanaaneestaan ama taabtaan iyadoona xaaraan tahay taabashada Eeyaha , Qurbo joogta qaarkood ayaana Dalalka ay ka yimaadaan ku heesta Eeyo iyagooan taasi ka dhigtay mid caadi ah .
Shirkado ajaaniib ah oo gacanta loo galiyay ilihii ugu muhiimsanaa dhaqaalaha Dalka (Warbixin)
Shirkado laga leeyahay Dalka Turkiga ayaa la wareegay ilihii ugu muhiimsanaa dhaqaalaha Dalka sida Dakada Weyn ee Magaalada Muqdisho iyo Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde.
Xukuumada Soomaaliya ayaa heshiis la gashay labo shirkad oo laga leeyahay Dalka Turkiga kuwaa oo lagu kala wareejiyay maamulida Dakada Weyn ee Muqdisho iyo Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde.
Golaha Wasiirada ayaa maalin kahor ansixiyay heshiis dhax maray Wasaarada Howlaha Guud iyo Gaadiidka Badda iyo Shirkada Al Bayrak oo ah Shirkada laga leeyahay Dalka Turkiga taa oo lagu wareejiyay Maamulida iyo Hormainta Dakada Muqdisho.
Shirkada Al Bayrak ayaa Dakada Weyn ee Magaalada Muqdisho maamuli doonta mudo 20-sano, waxaana Heshiiska lala galay Shirkada qeyb ka ah in dib u dayactir , qalabeyn , iyo casriyeyn kusameeso Dakada Muqdisho.
Golaha Wasiirada ayaa horey Maamulida Garoonka Diyaaradhaa Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho waxa ay ugu wareejiyeen Shirkada FAVORI oo ah Shirkad laga leeyahay Dalka Turkiga taa oo iyana mudo sanado ah gacanta ku heyn doonta Maamulida Garoonkaasi.
Dowlada Turkiga ayaa xiligan saameyn badan ku leh gudaha Soomaaliya waxa ayna hada maamulaan inta badan ilaha Dhaqaalaha Soomaaliya maadaama lagu wareejiyay Shirkado laga leeyahay Dalkaasi.
Hay'ado iyo Shirkado Turki ah ayaa sidoo kale maamula gacantana ku haya Isbitaalo iyo Iskuulo waa weyn oo kuyaala Magaalada Muqdisho , kuwaa oo inta badan lacago looga qaado Ardayda wax kabarata iyo dadka bukaan ahaanta u taga Isbitaalada gaarka ah ay maamulaan.
Dowlada Turkiga ayaa kasbatay niyada Shacabka Soomaaliyeed xiligii abaaraha ay dalka ku dhufteen , iyadoona Dowlada Turkiga ay noqotay Dowladii ugu horeesay oo taageero muuqdo oo dhinacyo badan ah u fidisa Shacabka Soomaaliyeed.
Daawo Sawirada qaabka ay dacwooyinka u qaado Maxkamada Gobolka Banaadir.
Maxkmaada Gobolka Banaadir ayaa ah mid saxmad badan, waxaana maalin kasta Xarunta Maxkamada kasocda dacwado udhaxeeya dad wax isku heesta iyo kuwa loo heesto dambiyo kala duwan ay galeen.
Maxkmaad ayaa xiliga dacwada la qaadayo waxaa soo xaadira oo la keenaa dambiilayaasha dacwada loo heesto iyo waliba dadka kale ee dacwada isku heesta , marqaatiyaal iyo dad kale oo iyana daneenaya dacwadahaasi iyo qaabka ay u dhamaanayaan.
Daawo sawirada:Madaxweynaha J.F. Soomaaliya oo si heer sare ah loogu soo dhoweeyey Turkiga .
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamud iyo wafdi uu hoggaaminaya ayaa si heer sare ah loogu soo dhoweeyey magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Madaxweynaha waxaa ku wehliyey safarkan Wasiir ku xigeenka Arrimaha Dibedda, Jamaal Maxamed Barrow, xildhibaano, iyo mas’uuliyiin kale.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta la kulmaya Madaxweynaha Turkiga Abdullah Gul iyo Ra’iisul Wasaaraha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo uu kala hadli doonaa xiriirka labada dal, isagoo Madaxweynaha Soomaaliya uu uga mahadcelin doonaa doorkii hoggaamineed ee Turkigu ka qaatay arrimaha Soomaaliya oo bedeshay sida uu caalamku ula dhaqmo Soomaaliya. Sidoo kale Madaxweynahu waxuu kala hadli doonaa shirka berri ka dhacaya Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey oo looga hadli doono sidii loo taageeri lahaa Ciidanka Dowladda si loo soo afjaro dagaalka kooxaha Al-Shabaab, bacdamaa Madaxda Turkiga ay garab istaagan yihiin Soomaaliya isla markaana ay caalamka si aad ah ugu ololeeyaan in Soomaaliya la garab istaago.
Xildhibaan katirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo manta ku geeriyooday Magaalada Nairobi.
Xildhibaan katirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ku geeriyooday Magaalada nairobi ee Dalka Kenya kadib xanuuno in mudo ah hayay laguna daweenayay isbitaal kuyaal Magaalada Nairobi.
Allaha u naxriistee Xildhibaan Cumar Islow Maxamed ayaa maanta ku geeriyooday Isbitaal ku yaala Magaalada Nairobi uu mudooyinkan u jiifay xanuuno hayay iyadoona qaliino lagu sameeyay kadib uu geeriyooday Xildhibaanka.
Fadhigii Baaramaanka ee maanta ku lahaayeen Xarunta Golaha Shacabka ayaa la baajiyay kadib markii ay soo yeertay geerida ku timid Xildhibaan Islow oo in mudo ah kasoo mid ahaa Baarlamaanadii KMG ahaa kana mid ahaa Baarlamaanka hada jira.
Gudoonka Baarlamaanka ayaa sheegay in ay wadaan qaban qaabo ku aadan aas Xildhibaanka loo sameeyo xiliyada soo aadan, iyadoona Xildhibaano badan oo katirsan Baarlamaanka ka tacsiyeeyeen geerida ku timid Xildhibaan Islow.
War Deg Deg Ah Dagaal Cuus oo u dhaxeeya Ciidamo kawada tirsan Dowlada Soomaaliya oo xiligan kasoconaya Magaalada ..
Wararka aan ka heleyno Magaalada Garbahaarey ee Xarunta Gobolka Gedo ayaa sheegaya in xiligan dagaal culus oo u dhaxeeya Ciidamo kawada tirsan Dowlada Soomaaliya uu xiligan halkaasi kasoconayo.
Goob joogayaal kusugan Garbahaarey ayaa sheegay in xiligan uu dagaalku socdo una dhaxeeyo ciidamo kawada tirsan dowlada oo halkaasi ugu dagaalamaya qaab beeleed.
wali si rasmi ah looma oga waxa keenay dagaalka u dhaxeeya Ciidamada kawada tirsan dowlada ee xiligan kasocda Garbahaarey , mana lahayo ilaa hada qasaaraha ka dhashay Dagaalka wali socda.
Dagaalka u dhaxeeya Ciidamada kawada tirsan Dowlada ee kasocda Garbahaarey ayaan la ogeyn in uu daba socdo dagaalo soo noq noqday oo Degmada Baladxawao ku dhax maray ciidamo daacad u ah Ahlu Sunna iyo Dowlada.
Shirkad dacwad ka gudbisay Dowlada Federaalka Soomaaliya una qabsatay qareeno.
Shirkada SKA oo Dhawaan Xukuumada Soomaaliya ay ka warejisay maamulida Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho ayaa wada dacwado ka dhan ah dowlada Soomaaliya.
SKA ayaa xoog looga qaaday maamulida Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho xili in mudo ah gacanta ku heysay Maamulkeeda kadib heshiis 10-sano ah ay la gashay Dowladii KMG uu Hogaaminayay Madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Xildhibaan Cali Khaliif Galleyr oo ka mid ah Mudanayaasha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Baarlamaanka hortiisa ka sheegay in Shirkada SKA ee laga wareejiyay maamulida Garoonka Aadan Cadde in ay Dowlada Dacwad ka gudbisay ayna qabsatay Shirkadu Qareeno u dooda.
Caki Khaliif oo inta badan la ogyahahy in uu aad u dhaliilo Dowlada hada jirta ayaa xusay in Shirkada SKA ay ku saxantahay in ay dacwad ka gudbiso Dowlada , waxa uuan Baarlamaanka ka horsheegay in loo baahan in sharafta dalka la difaaco .
Xukuumada Soomaaliya ayaa ka wareejisay maamulida Garoonka Diyaardaha Aadan Cadde Shirkada SKA iyaga oon ku qanacsaneyn, waxaana hada lagu wareejiyay oo maamulka Garoonka gacanta ku haya Shirkada FAVORI oo ah shirkad laga leeyahay dalka Turkiga.
Shirkada SKA ayaa horey dacwad ugu gudbisay Maxkamada Sare ee Dalka balse wax natiijo ah oo wax u tara Shirkadaasi kama soo bixin maxkamada, iyadoona Shirkadu sheegtay in Maxkamado caalami ah ka dacwoon doonto.
Xukuumada Soomaaliya oo ka hadashay dilkii loo geestay Madaxii isqarxinta Xarakada Al-Shabaab.
Xukuumada Soomaaliya ayaa war kasoo saartay duqeyntii maalintii shalay ka dhacday Gobolka Jubada Dhaxe ee lagu Dilay Saraakiil sar sare oo katirsanaa Xarakada Al-Shabaab kuwaa oo inta mudo ah baadi goob lagu hayay.
Wasiirka arimaha gudaha Soomaaliya C/kariin Xuseen Guuleed oo Warbaahinta Dowlada la hadlay ayaa sheegay in Xukuumada Soomaaliya ay wax badan ka ogtahay Weerarkii shalay diyaaradaha Drone-ka ku dileen Saraakiil katirsan Xarakada Al-Shabaab.
Mr Guuleed ayaa xusay in Weerarkii shalay lagu dilay Saraakiil uu ku jiray Madaxii isqarxinta iyo Farsameynta Miinooyinka Al-Shabaab oo lagu magacaabi jiray Ibraahim Cali Cabdi oo loo yaqaanay Anta Anta kaa uu sheegay in mudo ah in lagu raad joogay shalayna lagu guuleestay in la qaarijiyo..
Wasiirka Arimaha gudaha iyo Amniga qaranka ayaa sheegay in Sargaalkan la dilay in mudo ah Dowlada Soomaaliya ay ku raad joogtay , waxa uuna xusay in dilkiisa ay niyad jab ku tahay Kooxda Al-Shabaab .
'' Waxa ay qaldaan raga madaxda u ah Al-Shabaab dhalinyarada yar yar inta miinooyin iyo waxyaabo kale oo qarxa kusoo xiraan ayey noloshooda halaagaan , waxaana cadeeneynaa in Saraakiisha gadaal ka fadhisa dhalinyarada ay qaldaan in iyana aysan faka neyn oo lagu raad joogo lana qaarijin doono '' ayuu yiri Wasiirka Arimaha gudaha.
Duqeynta lagu dilay Ibraahim Cali Cabdi oo loo yaqaanay Anta Anta ayaa ka dhacday inta u dhaxeysa Deegaanada Dhay Tubaako iyo Xaramka ee Gobolka Jubada Dhaxe , Dowlada Soomaaliya ayaana ku tilmaantay dilka sargaalkan mid muhiimad weyn ugu fadhisa Dowlada iyo guud ahaan Shacabka Soomaaliyeed.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo Caawa u Ambabaxay Dalka Turkiga.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maqribadii ka ambabaxay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde,isagoo ku sii jeeda dalka aan walaalaha nahay ee Turkiga.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa casuumaad rasmi ah ka helay madaxweynaha dalka Turkiga mudane C/lla Guul.
Labada madaxweyne ayaa yeelan doona kulan ay kaga wada hadlayaan xiriirka u dhaxeeya labada dal iyo mashaariicda horumarineed oo ay dowlada turkiga ka wado Soomaaliya.
Madaxweynaha soomaaliya ayaa inta uu ku suganyahay dalka Turkiga waxa uu kulamo kala gadisan la qaadan doonaa mas’uuliyiin dowlada turkiga.
Soomaaliya iyo Turkiga ayaa waxaa ka dhaxeeya xiriir saaxiibtinimo oo soo jireen ah.
Daawo Sawirada Madaxweynaha oo Maanta Muqdisho ku qaabilay Wasiirada Arrimaha Dibedda Holland iyo Shirkado ganacsi.
"Booqashadaadu waxey ka mid tahay wafdiyo caalami ah oo beryahan soo booqanyey Soomaaliya, aad iyo aad baana ugu faraxsanahay inaan Wasiiradda maanta ku soo dhoweeyo dalka, oo na tuseysa horumarka ammaanka ee ka jira dalka Soomaaliya iyo sida ay beesha caalamku u aqoonsanyihiin Soomaaliya"ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
Madaxweynaha ayaa sheegay in xiriir qoto dheer uu ka dhaxeeyo Soomaaliya iyo Holland, isla markaana ay dalka Holland ku nool yihiin Soomaaliya badan
“Xiriir qoto dheer baa labadeena dal ka dhaxeeya, oo weliba Holland ay degen yihiin Soomali badan, waxaan dowladda Holland uga mahadcelinayaa dadaalkooda iyo is-garab istaaga ay nala garab joogaan inay na saacidaan, Qorshaha New Deal-ka iyo dokumentigii loogu magac daray Compact-ka ayaa noo ah bilow fiican oo tusineysa xiriirka caalamka iyo Soomaaliya"ayuu yiri Madaxweynaha
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa shegay in Dokumentiga Compact-ka uu yahay mid Soomaali sameysatay oo qeexaya baahida dib u dhiska dalka ee muddada 3-da sano ee soo socota.
"Waxaana ka rajeyneynaa dowladda Holland inay qorshahaas nala garab istaago si aan ugu guuleysano in dalkan dib loo dhiso dhammaan hay’adihii dowliga isla markaana bulshada Soomaaliyeed la wada gaarsiiyo adeegyada aasaasiga ah"ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
"Maalgashi caalami ah iyo xiriir caalami ah ayaa Soomaaliya dib ugu soo noqday, waana inaan fursadahaas aan ka faa’iideysanaa oo aan caalamka tusinaaa in Soomaaliya ay nabad tahay oo la maalgeshan karo, si dhalinyaradeena ay u helaan fursado shaqo oo muhiim u ah horumarka dalka"
In Dowladda Holland ay shirkadaheeda caalamiga ah ay yimaadaan Soomaaliya waxey caddeyn u tahay horumarka ballaaran ee sanadkii la soo dhaafay laga gaaray dhinacyo badan, oo tuseysa in caalamku diyaar u yahay inay maalgashi ku sameeyaan Soomaaliya. Dowladdu waxey waddaa shuruucdii maalgashiga oo baarlamaanka horyaalla oo tusaya in ganacsida iyo maalgashiga Soomaaliya ay yihiin kuwa sharciyeysan oo keeni kara in dhaqaalaha dalka uu kordho. “ Ayuu madaxweynahu ku soo gabogabeeyey hadalkiisa.
Wasiirada Arrimaha dibada Holland ayaa sheegtay in shirkadaheeda maalgashiga ay imaan doonan Soomaaliya, iyadoo dowladda Soomaaliya u balan qaaday inay ka taageeri doonaan dhinacyada dib u dhiska dalka.
Shir looga hadlayey horumarinta, iyo dib-u-dhiska dalka oo Maanta Muqdisho ka furmay (Daawo Sawirada)
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid” ayaa maanta daah furayey shir looga hadlayey horumarinta, iyo dib-u-dhiska dalka Soomaaliya, shirkaan ayaa noqonaya kii ugu horeeyey oo looga hadlo dhaqan galinta Higsaga Cusub, Waxaana shirkaasi ka soo qayb galay wakiillo ka kala socday xafiiska Madaxweynaha, Baarlamaanka, Wasiiro, Xubno ka socda Bulshada Caalamka, Bulshada Rayidka ah iyo xubno kale oo ka socday gobolada dalka.
Shirkaan ayaa ah mid ay dowladda Soomaaliya iyo Bulshada Caalamku ay isku waafaqeen dhisidda guddi aruuriya xogaha iyo diyaarinta istiraatiyad lagu hormarinayo dib-u-dhiska Soomaaliya, taas o fulinteeda loo marayo barnaamijka Higsaga Cusub, iyadoo ahmiyada la siinaya arrimaha siyaasada, dhaqaalaha iyo isku xirka macaawinooyinka la siinayo Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaare Saacid ayaa ku tilmaamay shirkaan inuu leeyahay muhiimad gaar ah taas oo ah xaqiijinta mirihii ka soo baxay shirkii barnaamijka Hiigsiga Cusub ee 16, Sept,2013 ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Beljamka.
“Dowladaydu waxa ay diyaar u tahay inay qaadato masuuliyad weyn marka laga hadlayo mustaqbalka Soomaaliya, shirkaan waxa uu ka mid yahay tallaabooyinkii ugu horeeyey ee lagu xaqiijinayo ka dhabaynta riyadii Higsiga cusub ee ay dadka iyo dowladooduba isagoo dukumenti dhamaystiran ah hor dhigeen Shirkii Brussels” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Saacid